नेपाल आज | हनुमानसँग भष्मे डन किन डराउँछ ? ‘भष्मे डन’बाटै सुन्नुहोस् जवाफ (भिडियो अन्तर्वार्ता)
हनुमानसँग भष्मे डन किन डराउँछ ? ‘भष्मे डन’बाटै सुन्नुहोस् जवाफ (भिडियो अन्तर्वार्ता)
चलचित्र पशुपतिप्रसादमा ‘भष्मे डन’को भूमिकापछि विपिन कार्कीको अभिनयको तारिफ नगरी बस्ने कमै भेटिए ।
छड्के, पशुपतिप्रसाद, जात्रा हुँदै उनको अर्को फिल्म लुट–२ पनि आउँदैछ । पशुपतिप्रसादका खलनायक जात्रामा नायक भए । लुट–२ मा उनको भूमिका छोटो रहेको उनैले जानकारी दिए ।
चौतर्फी प्रशंसा बटुलिरहेका भष्मे डन अर्थात विपिन कार्कीलाई भेट्न हामी तीनकुने र सिनामंगलबीच रहेको उनको अफिस पुग्यौं । उनको धेरैजसो समय त्यही कार्यालयमा बित्छ । फिल्मसम्बन्धी काममा नै उनको धेरै समय खर्च हुन्छ ।
सच्चा कलाकार त्यो हो जसले आफ्नो वास्तावीक छविलाई लुकाएर पात्रको चरित्रमा डुब्दै भिन्न काम गर्छ । यसको जीवन्त उदाहरण हुन् अभिनेता बिपिन कार्की । दश वर्षसम्म थियटरमा काम गरिसकेपछि ठूलो पर्दामा देखिन थालेका बिपिनको अभिनयलाई दर्शकले औधि रुचाउँन थाले । पहिलो फिल्म छड्केमा उनले गरेको बिन्दुको अभिनयले धेरै दर्शकलाई तान्यो । ‘छड्के’ हुँदै ‘पशुपतिप्रसाद’ मा भष्मे डनको रोलले उनलाई दर्शकमाझ झनै लोकप्रिय बनायो । भष्मे डनको भासिँएको स्वरलाई मन पराउने जमात अहिले पनि धेरै छन् ।
फिल्ममा बनाएको भाँसिएको स्वर फर्केर नआउला भनेर चिन्तित थिए बिपिन । तर, भाग्यवश स्वर फर्कियो । एक क्यारेक्टरबाट लोकप्रिय भएपछि उनलाई त्यही क्यारेक्टरमा फिल्म खेल्ने अफरहरु धेरै आए । तर बिपिनले त्यस्ता अफर अस्वीकार गरे । उनको मत छ, ‘एउटा क्यारेक्टर एक ठाउँमा मात्रै प्रयोग गर्नु ठीक हो ।’
सामान्य कुराकानीमा यी कलाकारले भष्मे डनको रोल कसरी कुशलतापूर्वक निर्वाह गरे होलान् भन्ने जो कोहीले सोध्न सक्छन् । सामान्य कलाकारले गर्न नसक्ने अभिनय गर्छन विपिन । फिल्ममा पनि शुरुदेखि अन्त्यसम्म उनको अभिनय एकतमासले बगिरेहेको हुन्छ । पशुपतिप्रसादमै उनले कुनै एक सिनमा पनि ‘भष्मे डन’को चरित्र तलमाथि हुन दिएका छैनन् । सामान्य अवस्थामा उनी जस्ता देखिन्छन्, फिल्ममा उनी वास्तवमै फरक देखिन्छन् । जसका कारण सार्वजनिक स्थलहरुमा पनि उनलाई धेरैले चिन्दैनन् ।
कुनैबेला अहेब पढेर बसेका बिपिनलाई यसरी कलाकारितामा आउँछु भन्ने थिएन । गुरुकुलमा जान थालेदेखि अभिनयको रस बस्न थालेको उनले बताउँदै आएका छन् । यसका साथै उनका दाजु अर्जुन कार्की पनि नेपाली सिनेमाका नायक थिए । दाजुको पुस्ताको फिल्म आफूलाई त्यती मन नपरे पनि उनको हावाले अलि अलि छोएको हुन सक्ने उनले अनुमान लगाए । उनले व्यक्तिगत रुपमा भने दाजुलाई यो कुरा कहिल्यै सुनाएनन् ।
सामाजिक सञ्जाल होस वा फिल्मी प्रशंग चल्न आमरुपमा दुई प्रश्न सोध्ने गरिन्छ । ती प्रश्न हुन् फिल्म बाहुबलीमा ‘कटप्पाले बाहुबलीलाई किन मार्छ ?’ अर्को हो ‘हनुमानसँग भष्मेडन किन डराउँछ ?’
यी दुवै प्रश्न अहिलेसम्म अनुत्तरित छन् । तर भष्मेडनले यसको जवाफ दिएका छन् । आखिर हमानुसँग भष्मेडन किन डराउँछ त ? विपिन भन्छन्, ‘ भष्मे डराउनुको कारण खोतल्ने सिन थियो । गदाले हानेर भष्मे बेहोस हुने र हनुमानजीसँग डराउन थालेको देखाउने भन्ने थियो । पूरा फिल्मको सुटिङपछि निर्देशकले त्यो सिन खिच्नु पर्छ भन्ने ठानेनन् । निर्देशकले नै यतिले पुग्छ भनेपछि सुटिङ गरिएन । तर अहिले यहि प्रश्न धेरैले गर्छन् । सायद त्यो दृश्य राखेको भए ठीकै हुन्थ्यो होला ।’
अन्य कलाकारहरु हिरो भएर चर्चामा आउँछन् या हिट हुन्छन् । तर, बिपिन कार्की भष्मे डन भन्ने गुण्डाको क्यारेक्टरबाट हिट भएर । यसरी गुण्डा भएर पनि हिट हुँदाको अनुभव उनले फिल्मको कथावस्तुकै कारण औल्याएका छन् ।
उनी अभिनयको मैदानमा उत्रिएको दश वर्ष भयो । तर, दर्शकमाझ चिनिन थालेको धेरै समय भएको छैन । सानो सानो कामबाट झ्वाट्ट दर्शकमाझ आइहाल्नु भन्दा पनि सक्षम भएपछि एकै पटक दर्शकमाझ चिनिन मन लागेको उनी बताउँछन् । फिल्म छड्के पछि पनि उनलाई मिडियाबाट धेरै अन्तर्वार्ताको प्रस्ताव आयो । तर उनले धेरै प्रस्तावलाई नकारे । अचेल भने उनी मिडियाबाट त्यति भाग्दैनन् ।
उनी मोरङमा जन्मे । मोरङकै बिद्यालय र कलेजमा उनले पढे । मन नलागी नलागी अहेब पढेका थिए उनले । कलाकारिताको त त्यतिबेला उनमा कुनै रस थिएन । दाजु नायक भएको नाताले गर्दा पत्रपत्रिका पढेर र टिभी हेरेर पनि नेपाली फिल्मको नजिकको दर्शक भएर चासो राख्ने गर्थे उनी । काठमाडौं आए पछि उनी रत्न राज्यमा आर्टस पढ्न थाले । त्यही समयमा थियटर धाउँथे उनी । थियटरका कलाकार र उनीहरुको अभिनय र नाटकले उनी ट्वाल्ल पर्ने गर्थे । हेर्दा उनलाई अलिकति पनि अल्छी लाग्दैनथ्यो ।
गुरुकुलमा गएर अभिनय सिक्न थाले । आज बिपिन कार्की यो स्थानमा आउनुमा गुरुकुलकै देन भएको उनी बताउँछन् । नाटकको दुनियाँमा भने उनी रंगकर्मी सुनिल पोख्रेल र अभिनेता सौगात मल्ललाई आफ्ना गुरु मान्छन् ।
अभिनेता बिपिन कार्कीको आँखामा नेपाली फिल्मले सबै दर्शकलाई स्वाद दिन सकेको छैन । फिल्म काठ्माडौं बिराटनगरजस्ता शहरहरुमा माात्र चल्दैमा फिल्म हिट भयो भनेर निर्धारण नहुने उनको भनाइ छ । नेपाली फिल्म कर्णलीजस्ता ठाउँतिर पनि चल्यो भनेमात्र फिल्म इन्डस्ट्रिले फड्को मार्ने उनको मत छ ।
– कञ्चन न्यौपाने
bindu indu bipin karki chadke pashupati prasad vasme don